Maalinta: Meey 24, 2018
Xilliga Kaarka Deynta ee Antalya
Degmada magaalomadaxda waxay ku dartay codsiga kaararka deynka ee nidaamka gaadiidka aqoonsiga ee Smart City. Marka rakaabyaha maxalliga ah iyo kuwa shisheeye ay baska raacaan, waxay si fudud u bixin karaan kharashka gaadiidka iyaga oo isticmaalaya kaarka deynta ee aan la xiriirin. [More ...]
Halkalı-Gebze Commuter Line ayaa u adeegi doona Station 43
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaadhsiinta; inta ugu badan ee la dhammaystiray oo la filayo in la galo adeegga dhamaadka sanadkaan Halkalı-Gebze wuxuu kaqeybqaatay tijaabada imtixaanka 23kii Maajo 2018 khadka Tareenka. Wadida tijaabada [More ...]
Gaadiidka Baasifoorka ee Burburka ee Bursa
Qandaraaska waxaa loo qabtay sida uu shaaciyey Raiisel wasaare ku xigeenka Hakan Çavuşoğlu. 3 hindise bishii Abriil waxay keentay xaddiga bilyan ee '2.5 billion rodol' ee qadka Bursa-Osmaneli oo dhan. Si kastaba ha noqotee, ihale Hindisada wali lama soo gabagabeyn ilaa heerka sarrifka [More ...]
Hello Kitty Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu bilaabmayaa Japan
Japan gudaheeda, tareenka Kitty-ee loo yaqaan 'xawaare sare oo xawaare sare ah, 30 wuxuu bilaabmayaa Juun Sida laga soo xigtay wakaaladda Kyodo, shirkadda tareenka ee Galbeedka Japan, oo ay soo saartey shirkadda Japanese Sanrio ayaa dhiirigelisay dabeecadda xawaaraha sare ee Kit Kitty, [More ...]
KOS Gawaarida Gawaarida Gawaarida ee Hore ee IMM
Gawaarida qodista, oo ay ku nafwaayeen nolosha dad badan oo ah 3 asbuucii la soo dhaafay, ayaa banaanbax ka dhigay afaafka hore ee Dowlada Hoose ee Magaalada Istanbul. 2 waa arday jaamacadeed oo lagu burburiyey gaari weyn oo dhulka hoostiisa ah oo ku yaal Yogurtcu Park sannado kahor. [More ...]
Sicirada ajnabiga oo kordhin doonta Saameynta Saacadaha iyo Tareenka Tikidhada
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa ka qeyb qaatay barnaamijka Iftar ee caadiyan ay soo qabanqaabiyeen Isuduwayaasha Duullimaadyada ee Istanbul. [More ...]
Shilalka Gaadiidka ee Talyaaniga! Tareenka ayaa isku dhacey gaari
Tareen iyo baabuur ayaa ku dhacay magaalada Turin, waqooyiga Talyaaniga. Saddex gaari oo burburka ka dhashay shilkii dhacay. Darawalka gaariga xamuulka ah ayaa ka baxsaday goobta isagoo dhaawac ah. Wakaaladda wararka talyaaniga ee ANSA ayaa masiibo ku ah laba dhaawac oo soo gaadhay [More ...]
Ardayda waxaa la baray sharciyada gaadiidka dadweynaha ee Kocaeli
Gaadiidka Magaalada Kocaeli ee Magaalada KobaneliPark A.Ş., oo billowday inay socodsiiso howlo jid-tareenno ah oo laga bilaabay Khadka Tooska ah ee Akçaray Tram Line illaa iyo bishii Agoosto ee sanadkii hore, waxay sii waday wacyigelinta wacyigelinta si ay ugu dhiirrigeliso hiddaha nidaamka tareenka dadka Kocaeli. [More ...]
Ku raaxeysashada muusikada at Tramway
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, khadadka cusub ee taraamku waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan bartamaha magaalada Izmir, iyo sidoo kale raaxada "taas oo qoraallada duulaya" ay bixiyaan raaxada safarka. IMM pop Orchestra oo leh laba iyo saddex fanaaniin ah [More ...]
Gebze Halkalı Taariikhda furitaanka ee Qadka Magaaladu waa la cayimay
Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka, Gaadiidka iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, 23 May 2018 Arbacadii Halkalı-Kazlıçeşme wuxuu fuliyay waddo tijaabo ah, xariiqda halka ay shaqadu kasii waddo oo ay baaritaanno ku sameyso. “Mashruuca wuxuu keeni doonaa xariiqyo dhulka hoostiisa ah oo heer-hoosaadka tareenka [More ...]
Maareeyaha Aka: Asak ahaan Wasaaradda, Taageeradayada iyo Aamintayada TÜDEMSAŞ waa dhammaystir la'aan
Suat Hayri Aka, Isuduwaha Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa sheegay in TÜDEMSAŞ leedahay muhiimad taariikhi ah iyo sidoo kale muhiimadeeda istiraatiijiyadeed. Undersecretary of Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Suat Hayri Aka, Undersecretary [More ...]
Wasiirka Arrimaha Dibadda: Dik Waxaan Ku Qancay Arrimaha Maraakiinta Badbaadada ee Mashruuca Dowladda Federaalka "
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, ayaa yiri, dık Waxyaabo badan oo badda ku saabsan waxaan u qaadnay dhanka internetka dowladda. Sannadkan waxaan u wareejin doonnaa dhammaan macaamiisheenna nidaamka dawladda. ” Jaamacadda Piri Reis, Gaadiidka, Badda iyo [More ...]
Plus Protected System Money
Dhammaan diidmo, war-saxaafadeedyo iyo saxiixyo laga soo uruuriyay nidaamka lacagta lagu daray ee İZBAN kama niyadjabin karaan degmadu go'aankan. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay hirgalisay nidaamka 'lagu daray lacagta' IZBAN ka sokow culayska dhaqaale [More ...]
RayHaber 24.05.2018 Warbixinta Shirka
Haydarpaşa Ankara Line Km: 392 + 747-395 + 800 inta udhaxeysa isku xirida diyaarinta dayactirka ee albaabka Ponas waxaa lagu sameyn doonaa Adeegya softiweer oo la helayaa